पोटासियम Sorbate Cas 24634-61-5 आपूर्तिकर्ता, Bolise बाट निर्माता
[ अरु नामहरु ]
[क्यास कुनै होईन। ] 24634-61-5
[आणविक फार्मूला] C6H7KO2
[आणविक वजन] 150.22
१. खाना संरक्षण गर्नेहरू यसले प्रभावी रूपमा मोल्ड, खमीर anaerobic-Aerobic ब्याक्टेरिया गतिविधि रोक्न सक्नुहुन्छ, जस्तै चीज, वाइन,
दही, सुख्खा मासु, स्याउ साइडर, सफ्ट पेय र फल पेय, र बेक्ड सामान। त्यसो भए खानाको शेल्फ लाइफ लामो गर्न र खानाको मूल स्वाद राख्न।
2. यो धेरै व्यक्तिगत हेरचाह उत्पादनहरूमा प्रयोग गरिन्छ शेल्फ स्थिरताको लागि सूक्ष्मजीवहरूको विकासलाई रोक्न।
It. यो मुख्यतया मीठो वाइन, स्पार्कलिंग वाइन र केही हार्ड सिडरहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ।
[पोटासियम Sorbate बारे]
पोटासियम सोर्बेट सोर्बिक एसिडको पोटासियम नुन हो। यसको प्राथमिक प्रयोग खाद्य संरक्षकको रूपमा हो (E नम्बर 202)। पोटासियम सरबेट खाना, वाइन र व्यक्तिगत हेरचाह सहित विभिन्न प्रकारका अनुप्रयोगहरूमा प्रभावकारी हुन्छ।
पोटासियम सरबेट नयाँ प्रकारको खाद्य संरक्षक हो, जसले खानाको स्वादलाई प्रतिकूल असर नगरी ब्याक्टेरिया, मोल्ड र यीस्टको वृद्धिलाई रोक्न सक्छ। यसले मानव चयापचय समावेश गर्दछ, व्यक्तिगत सुरक्षा छ, र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्कृष्ट खाद्य संरक्षकको रूपमा मान्यता प्राप्त छ। यसको विषाक्तता अन्य संरक्षकहरू भन्दा धेरै कम छ, र यो हाल व्यापक रूपमा खानामा प्रयोग गरिन्छ। पोटासियम सरबेटले अम्लीय माध्यममा यसको एन्टिसेप्टिक प्रभाव पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, तर तटस्थ अवस्थाहरूमा यसको एन्टिसेप्टिक प्रभाव कम हुन्छ।
यदि तपाईं अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ भने पोटेशियम Sorbate जानकारी, हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ!